Faahfaahino Laga Helayo Iska Hor’imaad Ka Dhacay Degmada Jowhar. – Bogga Calamada.com
Faahfaahino Laga Helayo Iska Hor’imaad Ka Dhacay Degmada Jowhar.
Waxaa sii kordhaya khasaaraha ka dhashay iska hor’imaad xoogan oo habeenkii xalay gudaha degmada Jowhar ee gobalka Shabeelada dhexe ku dhexmaray maleeshiyaat ka wada tirsan dowlada Ridada federaalka.
Iska hor’imaadka ayaa yimid kadib markii maleeshiyaat ka amar qaata waziirka Dhalinyarada dowlada federaalka ay weerareen xarunta doorashooyinka degmada Jowhar balse waxey iska caabin kala kulmeen maleeshiyaatka Murtadiinta ee ilaalada ka hayay xaruntaasi.
Wararkii ugu dambeeyay ayaa sheegaya in iska hor’imaadka uu ka dhashay khasaaraha dhimasho iyo dhaawac ah oo soo gaaray maleeshiyaatka diriray.
Sidoo kale dadka ku dhaawacmay iska hor’imaadkaasi waxaa ka mid ah wiil uu dhalay Murtad Cali Guudlaawe oo ah madaxweyna ku xigeenka mamaulka gaalada u dhaseen gobalada Sh/dhexe iyo Hiiraan ahna gudoomiyha dowlada Ridada federaalka ee gobalka Shabeelada dhexe kaasi oo la xaqiijiyay in rasaasta ugu tagtay hooyga uu ka deganyahay degmadaasi.
Xaalad kacsanaan ah ayaa ka taagan degmada Jowhar’iyadoona ay suura gal tahay in markale maleeshiyaatka Murtadiinta ku wada dagaalamaan gudaha degmada Jowhar maadaama iska hor’imaadkooda salka ku hayao muran dhanka doorashada ah.
Maalmo ka hor ayeey aheed markii ciidamada Kufaarta Afrikaanta ay gudaha dhismaha xarunta doorashooyinka degmada Cadaado ee gobalka Galgaduud ay si bareer ah ugu toogteen mid ka mid ergada doorashooyinka kadib muran dheer oo ka dhashay doorashooyinkii ka dhacayay degmadaasi.